29 | January | 2008 | Save Burma
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ပုံနှိပ်ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲ
ပီတာအောင်/ ၂၉ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၈
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ
အင်းစိန်ထောင်၌ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို နအဖ စစ်အစိုးရက တရားမ၀င် ပုံနှိပ် ဖြန့်ဝေမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း ယမန်နေ့က ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့သည့် မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချို ၏ဇနီး မ၀ါဝါ၀င်းက “သူတို့ကို တရားဆွဲတာက ပုဒ်မ ၁၇/၂၀ တဲ့။ ထောင်ထဲမှာပဲ ရမန်လာယူ
တယ်တဲ့။ တရားမ၀င်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုလို့ပြောတယ်။ တရားရုံး ဘယ်နေ့ ထုတ်မှာလဲတော့ မပြောဘူး။ အမှုအတွက် ရှေ့နေငှားဖို့တို့ဘာတို့ကို ကိုပြုံးချိုက ဘာမှမပြောသေးတဲ့အတွက် ကျမတို့က ဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး ပေါ့နော်။ အထဲရဲ့အနေအထားက ခက်တယ်လေ။ လုပ်ခွင့်ရရင်တော့ လုပ်ရမှာပေါ့။ ကိုပြုံးချိုအပေါ်မှာမူတည်ပြီး အပြင်က ကျမက လုပ်ခွင့်ရှိရမှာ ပေါ့နော်။
အများနဲ့ လုပ်ထားတာဆိုတော့ အများ သဘောတူညီချက်နဲ့ ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ကိုပြုံးချိုအပါအ၀င် မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေး၊ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုအံ့ဖွယ်ကျော် စသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (၁၆) ဦးတို့ကို ၁၇/၂၀ ပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးဆိုးရွားရွား မရှိကြောင်း မ၀ါဝါ၀င်းက ပြောသည်။
ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇/၂၀ သည် မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ပုံနှိပ်ထုတ် ဝေသူများကို ချမှတ်သည့်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် (၁) နှစ်မှ (၇) နှစ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ်(၃)ထောင်မှ (၃) သောင်းထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဗဟို တရားရုံး ရှေ့နေ ဦးသိန်းညွန့်က ပြောသည်။
“သူ့ဥပဒေက ဥပဒေပေါ့ဗျာ။ ကျနော် တချက်ပြောချင်တာက လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် (၁၉) နဲ့ အခု ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ အပေါ်မှာ အရေးယူထားတဲ့အချက်က နှိုင်းယှဉ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာ စာတမ်းအပုဒ် (၁၉) ဘောင်အတွင်းမှာ ရောက်တယ်ဆိုရင် အခုလိုသူတို့ကို ပြည်တွင်း ဥပဒေအရ၊ ပုံနှိပ် ဥပဒေအရ အရေးယူတယ်ဆိုတာ ဥပဒေကြောင်းအရ သင့်မြတ်ခြင်းရှိမရှိ ဒါက မေးခွန်းထုတ် စရာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် (၁၉) ၌ လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင် ယူဆနိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာဖွင့်ဟ ဖော်ပြနိုင်ခွင့် လူတိုင်း၌ရှိကြောင်း၊ ထိုအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကို ထောက်ထားစရာ မလိုဘဲ လွတ်လပ်စွာဆည်းပူးနိုင်ခွင့်၊ လက်ခံနိုင်ခွင့်နှင့် ဝေငှဖြန့်ချိခွင့် ရှိသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက လိုက်နာပါမည်ဟု လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်း လျော့ချပေးရေး ဆန္ဒပြမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယမန်နှစ် သြဂုတ်လကတည်းက တရားမစွဲဆိုဘဲ ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီး ယခုအချိန်မှ ပုံနှိပ်ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၅ ခုက ခွန်ထွန်းဦးအပါအ၀င် ရှမ်းခေါင်းဆောင်များအား နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ရာတွင်လည်း ပုံနှိပ်ဥပဒေသည် တခုအပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် မရှေးမနှောင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးဆန္ဒပြသူ ကိုထင်ကျော်ကိုမူ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုဖြင့် ယခင်လက တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ။
Tagged with 88 Generation Students
World Focus on Burma (29 Jan 08)
Myanmar junta charges leading protesters
The 10, most of whom were leaders ofa1988 student-led uprising suppressed bloodily by the army, are accused of violating the former Burma’s Printing and …
European Union’s special envoy for Myanmar seeks Asian cooperation
Bangkok – The European Union’s special envoy for Myanmar on Tuesday stressed the need for close cooperation with Asian governments in speeding upasolution …
ASEAN rights execs meet on framework of regional body
Rights groups have cautiously welcomed the move, but stressed that time was running out to reverse abuses in rogue state Myanmar, which continues to detain …
“Passion for Form: Selections of Southeast Asian Art from the MacLean Collection” contains 53 of his best objects from Myanmar (formerly Burma), Thailand, …
Stallone: Time right for another ‘Rambo’
“Rambo,” the fourth in the series that began in 1982, takes place in present-day, war-torn Burma (called Myanmar by its current government), …
EU envoy calls for release of Myanmar’s Aung San Suu Kyi
BANGKOK (AFP) — The EU’s special envoy for Myanmar on Tuesday urged the country’s military regime to free democracy leader Aung San Suu Kyi as he kicked off …
Myanmar migrants fear worst from new Thai government
So, hopefully, the TRT-influenced PPP will take migration issues into account,” said Myint Wai of the Thai Action Committee for Democracy in Burma.
The film, which Stallone directs and stars in, sees Rambo takingagroup of mercenaries into war torn Myanmar, formerly known as Burma, in search of missing …
Irrawaddy Dam Construction Begins, Human Rights Abuses Begin
The Burmese state-run newspaper, The New Light of Myanmar, reported in May 2007 that seven hydropower projects on the Irrawaddy River had been designed to …
Myanmar Times CEO Supports Regime’s “Road Map”
By Wai Moe Burma’s English language weekly newspaper, The Myanmar Times, threw its support unequivocally behind the regime’s seven-point “road map” ina…
EU urges new govt to promote democracy in Burma
“The EU wants to cooperate with Thailand’s government to promoteapositive solution in Burma,” said Piero Fassino, EU Special Envoy to Burma. …
EU wants Thai help to pro¬mote democracy in Burma
Blogger detained amid increased surveillance of Internet; more …
On 21 January, Mizzima reported that Blogger.com, the most popular blog provider to users inside Burma, has been completely blocked after Myanmar Post and …
Myanmar frees four Indians
| IMPHAL: Myanmar authorities have released four Indian nationals who were arrested six months ago for entering the neighbouring country without valid documents, official sources said on Monday. | They were han…
| Rambo is back – bigger and bloodier. | By Peter Suderman | You can learn everything you need to know about from the title. It’s short, simple, and blunt. There are no Roman numerals, no colons, no hokey subti..
Tagged with 88 Generaation Students, ASEAN, Aung San Suu Kyi, Blog, Burma, Dam, Democracy, EU, EU envoy, Human rights, Internet, Irrawaddy, Ko Ko Gyi, Migrant, Min Ko Naing, Myanmar, Rambo, Stallone, Thai
ရခိုင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေတိုးလာ
သရပါအလုပ်သမားအရေး တိုင်းအစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ပျယ်
မြစ်ကြီးနား- ကန်ပိုက်တီလမ်းပေါ်က ဆဒုံးတံတားကျိုးကျ
နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ဖို့ တိုက်တွန်း
အာမခံချက်အတိုင်း စပါးမထွက်တာကြောင့် နစ်နာကြေးပေးဖို့ တောင်းဆို
Strasbourg shooting suspect killed by police, Paris authorities say December 14, 2018
The man responsible for the Strasbourg terror attack was killed by police Thursday afteratwo-day manhunt,aspokesman for the Paris prosecutor's office said.
EU tells May Brexit deal not up for renegotiation as wounded UK leader seeks lifeline December 14, 2018
Second Canadian detained in China as diplomatic spat intensifies December 14, 2018
Bolton slams China, Russia over 'predatory practices' in Africa December 14, 2018
National security adviser John Bolton unveiled President Donald Trump's Africa strategy on Thursday, outliningaplan that he said focuses heavily on countering China and Russia's expanding influence across the region, while also making sure US taxpayer dollars are spent responsibly withareduction in US involvement in United Nations peacekeeping […]
High-speed train crashes into bridge, killing seven, in Turkey December 13, 2018
Hungary's 'slave law' passes, sparking protests in parliament and on the streets December 13, 2018
Hungarian Prime Minister Viktor Orban on Wednesday showed no signs of heeding US and European Union warnings to rein in his "illiberal state," instead introducing new laws that critics say will tighten his grip on power.
Fire destroys 8,000 voting machines 10 days ahead of Congo's presidential election December 13, 2018
BMW's robot army makes 1,000 carsaday November 28, 2018
Negotiating for Nature December 14, 2018
Q&A: Many African Countries Already Live the Future of 2°C Warmer December 14, 2018
Decoding Article6of the COP24 Climate Negotiations December 14, 2018
Senior UN Official Resigns Undermining Sexual Abuse Charges December 14, 2018
Not Just the Big Guys Are Against the Compact December 13, 2018
The Evolution of Moroccan Immigration:aLesson for All Countries December 13, 2018
Costa Rica: First Country to Protect Sustainable Fisheries of Large Pelagics Species December 13, 2018
Q&A: Making Green GrowthaSuccess Across the Globe December 13, 2018